Voadika ny 11 Janoary 2013 7:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, አማርኛ, Español, Français
Ny hoavin'i Mali ( Marc-André Boisvert)
Nanimba an'i Mali tanteraka ny zava-nitranga lavareny tamin'ny 2012: fikomiana toaregy, ny fanonganam-panjakana[mg], ny faharavan'ny Avaratry Mali sy ny fibodoin’ ireo vondrona Islamista izany sisitany izany[mg] , korontana ara-politika sy ara-miaramila tsy manam-pahataperana. Tao anatin'ny herintaona, voaloto tanteraka ny endriky ny fianakaviambe iraisam-pirenena modelin'ny demokrasia sy ny fampandrosoana an'i Mali, noho ity Firenena ity mikorontana, reraka ary navela irery.
Na ny mpiokon'ny M23 ao RDC, na ireo Séléka ao RCA na ny vondrona islamista ao Mali, tarataratra fa tsy manandratra firehan-kevitra politika mazava ary tsy misy fandrindran'asa iraisana koa eo amin'ny vondrona isan-karazany miara-miombona. Tsikaritra anefa nanitatra ny ambaindainy ireo vondrona mitam-piadiana ireo nandritra ny taona 2012 ary manana toerana tsy azo ihodivirana amin'ny fampandriana ny fandriampahalemana eo amin'ny faritra misy azy avy. Araka ny nomarihan'i Julie Owono, ny fotoana nanaovana ny fanafihana tany RCA no mahatonga hieritreritra fa nanova zava-misy eo amin'ny tanjona fohy ezaky ny mpiokon'ny Séléka ny resa-bola. Tany RDC, noravahan'i Anna Gueye tamin'ny antsipirihany ny fahasarotana ara-tantaran'ny fiokoan'ny [mg] M23 sy ny fivoarany faramparany [mg]. Tsy lazaina intsony ny resa-bola any amin'ny faritra Kivu sy Katanga. Ny zava-baova nampalahelo tamin'ny 2012 dia hita ao amin'ny fiitaran'ny ady sy ny voina mahazo ny olona any amin'ny sisintany iraisana maro izay ahitana hiha-mahery vaika ny herisetra. Miezaka mafy ireo fisantaran'andraikitry ny mponina mba hiarovana ny fahasalamana sy ny firindran'ny fiaraha-monin‘ [mg] ireo mpiara-belona trotrak'ity fifandirana ity.
[…] ny fizarana voalohany tamin'ny tamberin'ny taona 2012 (izay hitanao ihany koa ato) [mg] , ny fizarana faharoa kosa miompana amin'ny fikomiana sivily manoloana olana amin'ny […]